musha AFRICAN STARS Taribo West Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Legend iyo inozivikanwa nezita rezita rezita; "Pastor". Isu Taribo West Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Ndiyo nyaya yake yeupenyu hwechikwata vasati vasarudzwa, hupenyu hwemhuri, nhau yemitambo, kuti akave sei mufundisi uye vazhinji OFF uye ON-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoyeuka pamusoro pezvishongo zvake zvemavara uye mavara. Kunyange zvakadaro, vashoma vashoma vadziki vanoziva zvakawanda nezveTaribo West's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Taribo West akaberekwa musi we 26th waMarch 1974 muPort Harcourt, Nigeria. Kufanana nevazhinji vechidiki vechiNigeria vaizoenda kuLagos vachiri kuyaruka, ndizvo zvakaita West. Paakazosvika kuLagos, West yakaedza kubata mabasa akawanda ekupedzisira muSouth Shomolu, ine ngozi, yakazara neboka rakagadzirirwa neWest kuBronx, New York City. Mumashoko ake ...
'Gamba remukati raizivikanwa seChishanu Boys. Iwe waiva pamwe navo kana kuti kurwisana navo, uye ndakafunga kuti zvingava nani kuva navo seshamwari kupfuura vavengi. Kuputsika, kurwisana, zvinodhaka uye kuiswa mumagariro kwaive kurongeka kwezuva. Tingazongobata vanhu mumugwagwa. '
Kumadokero paiva muLagos akawana pane zvemari yeuparwadziri sezvo aive machechi. Akasimbisawo mukurumbira wake kuburikidza nokutamba mumugwagwa. Uyezve ... Rimwe zuva, sezvo iye neshamwari yake yakanakisisa vakadzoka mumigwagwa nehomwe yemba yeba, vakaiswa kune imwe nhengo yeboka rechikwata, avo vaida mari yacho. Mushure mekurwa neboka iri rinokwikwidzana pamusoro pemari. Shamwari yeMadokero yakaramba kupa chikwereti chemari. Akabayiwa uye akafuridzira kufa pamugwagwa neshamwari yake West isina simba kumubatsira.
Taribo West akatiza nemari uye akadzokera kuna amai vake muPort Harcourt. Mushure mekuona rutivi rwakashata rwe gangsterism, akasarudza kupa simba rakazara kumutambo.
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Kukurira Mukurumbira
KuPort Harcourt, kuWest kwakatanga neOby United. Mushure mekunakidza vateereri mumitambo yeWest West yakazoonekwa neMuvhuro Sinclair muchengeti uyo akamutora kuti atambe Shark football club. Akaenderera mberi achitamba neObanta United ku1989, asati adzokera kuSharks mu1990. Kubva kuSharks, akaenderera mberi achitamba kuEnugu Rangers mu1991, asati asangana naJulius Berger mu1992 sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pasi apa.
Kutevera miedzo yakabudirira mukutanga kwe1993, West yakabatana neFrance neAuxerre inotungamirirwa naGuy Roux. Makore matatu gare gare, akava nhengo yeOlympic squad iyo yakakunda medari yegoridhe paZimbabwe yeOlympics yeChirungu. West yakaita maminitsi ose emutambo. Bhiza rake rakatsvuka rakazova chiratidzo chekuti hakuna-nonsense defender. Yaiva bvudzi raungaona kubva kune rumwe rutivi rwemukati.
Sezvo vhudzi rake rakaita zvishamiso, saizvozvowo kushanda kwake kwakasimba uye kugadzirisa zvinyorwa zvakanyanya kunyanya paaifamba kunyika yake.
Kukunda maOlympics kwakatungamirira Inter Milan kushevedza mabasa ake. PaIt, iye akaitamba naye Diego Simeone AKA Cholo uye Ronaldo Luís Nazário de Lima.
West yakava UEFA Cup inokunda sezvo iye akatungamirira Nerazzurri mutsara wokuzvidzivirira kuti akunde chikwata chaaiti akauya nemitambo yaakaita nevaroyi muNigeria.
Mushure mokubudirira muItaly, West yakasarudza kupedza nguva muDerby County, ichibatsira kuchengetedza ivo muLigeria League, zvino Kaiserslautern muGermany. Taribo aive nebasa rakamutora kumativi ese enyika, kunyange Iran, nevanomira muEurope munzira. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pamberi pese muNigeria muteereri we1996 Olympic, pane mukadzi mukuru kana musikana, kana kuti kutaura kunofamba. Kune Taribo West, kwaiva nemusikana wechibvumi anoyevedza nezita- Adenuke uyo akazoshandura mudzimai wake.
Mhemberero yavo yemuchato yakanga isingatauri chimwe chezvinhu zvinonakidza panguva iyo yakaitwa. Iko kuronga uye muenzi wezita yakaratidza kubva kune imwe mimwe yemitambo yemuchato yakaitwa panguva imwecheteyo. Zvisinei, vhiki nhatu mushure mekunge vakasungira nuptial knot, vakaroorana vakaparadzana. Zvakaitika mushure mekupa mhosva nekupomera mhosva dzekusatenda.
Vhiki nhatu muwanano, vhidhiyo yaive yakazara nezvakaitwa naAtinuke weTaribo's penchant yekuregeredza mitemo yake yemhuri isingatarisirwi nebheteri remudzimai wake. Taribo, parutivi rumwe rutivi, akarondedzera kuroorana semu sham, akatambudzwa nekushushikana, ruvengo uye pasina rudo. Akatsiura Atinuke nekusatendeka uye kusava nekuzvipira kune mhiko dzekuroorana. Izvi zvakasvika pane imwe nguva Atinuke akambonzwa runyerekuro kuti aine chikwata chebhengi rakakurumbira paaishanda kune bhizinesi rakakurumbira muNigeria.
Misiyano pakati pevatadzi vaviri vakange vasingazivikanwi yakave isinganzwisisiki uye ivo vose vakatungamira kudare rekurambana izvo zvakaitika. Kunyange zvazvo Taribo ari kunzi achitora basa rake rekufudza kusvika kune imwe nzvimbo inotevera muItaly, Atinuke akapfuurira mune imwe hukama.
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Achishandisa Charms neBabalawos
West akamboreurura kupisa makenduru uye kubata mabwe emagetsi ayo akawana kubva kuWench Doctors mberi kwemitambo. Akaenderera mberi achitaura kuti vatambi vakawanda nevakosi kazhinji havasi ivo pachavo kuita zvekushandisa varoyi. Paakabvunzwa naTana Ayejina, mutambi wemitambo yeNigerian Punch pepanhau kana aibatanidzwa muchiito ichi paaiva mubhodhi, akavapindura nenzira yakarurama EHE!. Mumashoko ake ...
"Zvechokwadi hongu, handizivi kuti nei vanhu vachiramba kutaura pamusoro pekubatana kwavo nemapenzi. Bhora rine chokuita nemasimba akawanda. Apo pane zviitiko zvikuru, iwe unotarisa panhandare, unoona vanhu, vateki vachikoka zvinhu zvemarudzi ose; magilisi varipo, voodooists aripo. Mumazuva angu okutamba, pandakanga ndisingazivi, ndaiwanzotora mamwe madzimambo uye babalawos (vanachiremba vemaitiro) kuti vaite marasha kwatiri, izvo zvatakatora kune (nyika) musasa. Dzimwe nguva yakashanda, dzimwe nguva haina.
Mune mamwe mapoka, musati mutambo wose, mutungamiri kana mutungamiri wekambani achakupa ruzivo runyararo kuti uite nayo. Vachakuudza kuti uise mubhokisi rako kana masokisi uye kutamba. Ndiko kutenda kwavo mashura; kuti inogona kuvabatsira kuti vawane mitezo.
Kune vamwe vadzidzisi vanobatanidzwa kune varoyi veAfrica nevanofananidzira kubva kuSenegal, Burkina Faso, Zaire kana kunyange Nigeria. Vanhu ava vanobvunzwa kuti vape mavosi aya migumisiro yemitambo kunyange vasati vatamba mitambo. Vanhu ava vanoona zvinhu zvisingazivikanwi uye vanogona kukuudzai nemashiripiti avo nemapenzi, kuti chii chichaguma chemutambo. Vanhu vanotenda uye vanoishandisa. Inoshanda kune avo vanotenda mairi. Ndakazviona, ndakazviziva, ndaive nevatambi vakashandisa uye ndakaishandisa. Saka, sei vanhu vachiramba? Kune maitiro nemitambo mubhola. Iyo ichiripo. "
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Maitiro aakazoshandura
Apo hanzvadzi yekuMadokero yainzi Patience uyo aiva muevhangeri, akabhadhara kushamiswa kushanya kumusha wake mutsva muMilan. SekuMadokero kuchiisa;
'Ndakazarura musuo, uye ndisati ndawana mukana wokuti ndaifara kumuona, akati:' Unofanira kuva nesimba kuti urarame mumba sezvizvi. ' Akandiudza kuti imba yakanga ine mahara aura, uye yakabvunza kuti ndedzipi tsika dzandaive ndichiita. Taribo West akatsamwa nemashoko ake uye akati ... "Dai akanga asiri hanzvadzi yangu ndingadai ndakamudzinga kunze."
Kufanana nevakawanda vemajhora, aive ane mashura zvikuru. Hanzvadzi yake uyo ari mukadzi waMwari anowedzera kumuudza kuti aigona kunzwa simba rekuita zvemashiripiti, uye akati aigona kuona imbwa mbiri - imwe yakachena uye imwe yakasviba - ichichirwisana mumba. Izvi zvakaitika apo mutambi wenhamba muTaribo anowedzera. Akanga achinyanya kushivirira nemashoko ake ndokukurumidza kumuudza kuti aifanira kudzidziswa. Kushivirira kwakakwanisa kugara kusvikira munin'ina wake adzoka kubva pakudzidziswa. Akatanga kunyengetera kuna Mwari kuti atende mukoma wake.
Apo West akadzoka kubva pakudzidziswa, hanzvadzi yake yaive nemamwe mashoko. Paakanga ari kunze, akanga akarara ndokuva nehope yakajeka yekuchena, achitaurira Taribo West kuti Mwari ari kumudana kubva panzira yake yakaipa yehupenyu achitaura zvaakarota pamusoro pake uye achimupa kunyevera pamusoro pemigumisiro yemabasa ake.
'Ndakaziva ipapo kuti ndaida rubatsiro rwaMwari,' Hana yeWest West yakamuita kuti azvireurura. Akafugama pasi nehanzvadzi yake uye vose vakatanga minyengetero. Sezvavakanga vachinyengetera, vese vateereri mumba vakatanga kuvhura nekuvhara mumweya. Taribo akamboyeuka ...
'Ndaifunga kuti ingangova mhepo chete, asi sezvo pfungwa iyoyo yakapinda mumusoro mangu, mikova yose yakatanga kubuda. Yakanga yakaita sechinhu chakabva mufirimu yakaipa, asi ndaiziva kuti ichokwadi. Ini ndakava nekunzwa kwakanaka mukati. " Izvi zvakaitika apo hanzvadzi yake yakaenda kwaari ndokuti: "Taribo, Ishe vakati iwe uchava mufundisi".
Izvi ndizvo apo paakawana zita rekudaidza 'Pastor' sezvaakaudza munhu wose kutanga kumudana iye. Hanzvadzi yake yakamupa matepi emuparidzi akagara muLondon, Mufundisi Ayo Don-Dawodu, avo mharidzo dzakatsigira kutenda kweWesten uye dzakamukurudzira kuti aise Shelter muushumiri hweDutu mu Affori, musha wekumusoro weMilan.
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Mabasa ehutungamiri muchikamu
Sezvo mushure mokunge atendeuka nehanzvadzi yake, uyo wekare wekuNigerian mutete wenyika pakarepo akatanga kutarisana nadhiabhorosi uye anotora zvidzidzo zvakare kuna Jesu muItaly.
Hazvina kutora nguva refu Taribo West atamira kuLagos Nigeria kuti agadzire bazi reMilan rakagadzirirwa Shelter muThe Storm Miracle Ministries weMarudzi ose. Edza sezvaungaita, iwe haugoni kufungidzira Mario Balotelli kutevera nzira imwechete muGhana.
Kunyange mumakore mushure mekunge apedza basa kubva kumutambo, Taribo akaenderera mberi kuunganidza vateveri kuburikidza nekugadzira mhirizhonga ine simba (inoratidzika pasi apa) muAjegunle, guta rakakurumbira zvikuru reNigerian apo chinangwa chake chaiva chokushandura zvikwata zvemakumbo iye zvino aigara mararamiro ake ekare. Taribo akakwanisa kukwidza $ 2million kuti awane gwaro rekugara kune avo vari mumigwagwa yeAjegunle.
Munhu wose aiziva kuti akanga aine rupo uye ainyanya kutaura kuvanhu. Kazhinji kacho, panzvimbo yekuumba zvivako zvemasangano, Taribo anoenda kune imwe nzvimbo yekuparidza sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Painful Last Days
MunaJanuary 2007, West yaiva pedyo nekusayina neCroatia club Rijeka, asi yakakundikana mushonga wake. Akazoenda kuIran ndokubva asayina chikamu chegore rimwe chete nePaykan muna August 2007. Kumadokero kwakakundikana kutanga nekambani, sezvo chibvumirano chake chikaguma nekubvumirana kwemwedzi mitatu gare gare. MunaFebruary 2008, West inonzi inonzi yakabatana neboka reSegunda División Xerez, asi mutungamiri wekambani akaramba chero ruzivo rwekuuya kwake.
Mushure mekurega basa, West akati ...'Ndichaenda kuMilan uye ndive mufundisi anodzidza,' anoti. 'Hapana nzira yandingagona kuva mudzidzisi. Uyu ndiwo mugumo webhola kwandiri ' Anoseka kufunga kwayo.
Taribo West Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts -Age Controversy
Muna 2010, yakanzi iWest nedzimwe nyika dzeNigeria, dzakadai Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu uye Obafemi Martins, vakanga vakura makore manomwe kupfuura zvavakataura. MunaEpril 2013, Žarko Zečević, aimbova munyori mukuru weParzan, akati West ndiyo makore akakura kupfuura yezera rake. Nguva pfupi pashure, West vakaramba kupomerwa.
Zarko Zecevic akaudza pepanhau reSerbia Vecernje Novosti: "[West] akabatana nesu achitaura kuti aiva 28. Takazoziva kuti ndiye 40, asi iye achiri kutamba zvakanaka, saka handina kuzvidemba kuti ndaive naye muchechi. "
CHOKWADI KUTI: Tinoonga nekuverenga Taribo West Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.